Canadanepal.net: The story of Susta! NEWS24 TV
The story of Susta! NEWS24 TV
३३ हजार हेक्टर बढी जमिन मिचिएको सुस्ताको पीडामा सरकारको ध्यान गएन, सीमा रक्षामा खटिएका नेपाली नागरिक अझै ‘अनागरिक’को दर्जामा । सुस्ताको कथा ! सीमा समस्या आजको होइन । भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्र होइन सुस्तामा पनि धावा बोलेको छ । सार्वभौम नेपालीको हरेक मन चुँडिने गरी भारतीय सिपाहीका बुट नेपालीको छातीमा बज्रिने गरेको छ । हालै सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालको पूर्ण नक्सा जारी गरेको छ । योसँगै सुस्ताका कथाहरु पनि सरकारले सुन्नुपर्छ । कहिले कहीँ जाग्ने काठमाडौंको राष्ट्रबादमा सुस्ताको पीडा किन छुट्छ ? सुस्तालाई जोगाउन भारतसँग लड्दै आएका नेपालीहरुको प्रश्न हो, यो । नेपालको लिम्पियाधुरालाई भारतिय नक्सामा गाभेको विषयमा नेपालमा विरोध भइ रहदाँ दुखि रहने अर्को घाउ हो, सुस्ता । जहाँ नेपाली स्वाभिमानमाथि सदैव धरपकड भई रहन्छ । जुवाडेले हारेर छाडेको खाल जस्तो अवस्था छ । जहाँ सदैव अस्मिता बचाउन सुस्ताले चित्कार छोड्नु पर्छ, काठमाडौँको सिंहदरबारको कान फुट्ने गरी । तर सिंहदरबारले कहिल्यै वास्ता गरेन । सुस्ता भारतको विहार र उत्तर प्रदेश दुवैसँग सिमाना जोडिएको छ । जहाँ २ सय ६३ घरधुरीको बसोबास छ । सुस्ताको ४० हजार ९ सय ८० हेक्टरमध्ये भारतले मिचेर बाँँकी ७ हजार ५ सय हेक्टर मात्रै नेपालले उपभोग गरेको छ । सुस्तामा जङ्गे पिल्लर नम्बर २६, २७ र २८ रहे पनि हाल ती पिल्लरहरू सारिएको र कैयौँ सहायक पिल्लरहरू हराएका छन् । सिमल रुखलाई नै जंगे पिलर मान्नु परेको छ । सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ः ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर भारतले मिचेको ः ३३ हजार ४८० हेक्टर नेपालले उपभोग गरेकोः ७ हजार ५ सय हेक्टर स्थानीय बासिन्दाले ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ चलाउन थालेको धेरै भइसक्यो, तर सरकार र राजनीतिक दलहरूले चासो नदिंदा सुस्ता अभियान पनि सुस्ताउँदै गएको छ । यसबारे बेलाबेलामा कुरा उठ्छ, अनि तेल सकिएको टुकीझै निभ्छ । मुलुकबाट छुट्टएिको टापु हो सुस्ता । तीनतिर भारतको सीमा छ भने एकातिर नारायणी । दशकौंदेखि सुस्तावासीहरू यसरी नै बस्दै आएका छन् । भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने सीमा बजारमा उनीहरू निर्भर छन् । दैनिक उपभोग्य सामान खरिदका लागि सीमा बजार जानु बाध्यता हो । हरेकपटक किनमेल गर्न जाँदा भारतीय सुरक्षा बलले ’तिमीहरू नेपाली हौ भने आफ्नै बजारमा किनमेल गर, भारतीय हौ भने यहाँ आऊ’ भन्ने वचनले सबभन्दा बढी घोच्ने गरेको छ । उनीहरूका लागि भारत र नारायणी नदी उस्तैउस्तै हो । किनभने आफ्नोतिर जाऔं भने नदीले छेक्छ, भारततिर जाँदा सुरक्षा बलले । नारायणी नदीमा गण्डक बाँध बनेपछि साँधमा अवस्थित यो भूमिका बासिन्दाले अनेकपटक अनेक दुःख झेलिरहेका छन् । २०२२ सालमा राजा महेन्द्रले बस्ती बसाउने भएपछि विभिन्न ठाउँबाट फरक–फरक रहनसहन भएका परिवारहरू सुस्ता आइपुगेका थिए । यहाँ आइपुग्नेमध्ये भूपू–सैनिकहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र सुरक्षाको प्रवन्ध थियो । ०३१ सालमा यहाँका स्थानीयलाई सरकारले लालपुर्जा दिएको थियो । २०३६ सालको चुनावअघि सुस्तालाई त्रिवेणीमा लगेर गाभियो । पहिलेका सेवासुविधाहरू केही पनि भएनन्, सुस्तासँग । न बजार थियो, न पुलिस । बस, चकमन्न ठाउँ थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा सुस्ताका जनता लामो समयसम्म कहिले बाढी, कहिले भारत त कहिले आफ्नै राज्यबाट पीडित बनिरहे । सुस्तामा २०६३ कात्तिकबाट शसस्त्र प्रहरी बस्न थालेपछि भने एसएसबीको ज्यादती कम भएको अनुभव छ । सिमाको सुरक्षा कवज बनेका सुस्ताबासीको सुरक्षाको चासो राज्यले किन गर्दैन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।